Izidlo ngebhali nemifino akuyona kuphela simnandi kakhulu, kodwa futhi fantastically ewusizo. Nge ubuncane kilojoule ziqukethe esiningi amavithamini namaminerali. Ngakho-ke, kufanele avele njalo ekudleni kwethu.
Ukupheka kahle ibhali, kubalulekile ukwazi izimfihlo ezincane ezimbalwa. Ngaphambi ukupheka oluthile lokudla kumele ngokuphindaphindiwe bahlanza. Ngenxa yale njongo kwasakazeka esitsheni ezijulile futhi ugcwele amanzi abandayo. Zonke kahle exubile nokushintsha uketshezi. manipulations okunjalo kufanele kwenziwe njengoba nje amanzi ngesitjeni izohlala sobala.
Ukuze banciphise isikhathi ukupheka, kuyinto efiselekayo cwilisa cereal bakushiye amahora amane. It Kunconywa ukuba asilungise epanini elikhulu, ngoba ngesikhathi ukwelashwa ukushisa yokusanhlamvu ukwandisa kakhulu ivolumu.
Lokhu croup kuhambe kahle hhayi kuphela inyama. esihlwabusayo kakhulu ibhali etholakala nge imifino. Indlela Yokuphila Isikhathi wokudla kungase kushintshwe kuye ngalokho okuthandwa umuntu. Kuvame ukungezwa izaqathe, u-anyanisi, amakhowe, zucchini, utamatisi, ngisho uphizi.
Ngokusho ubuchwepheshe kukhonjisiwe ngezansi etholwe ngokwanele eqotho okumnandi Meatless izitsha. It ayinazo izithasiselo ezilimazayo, Ngakho-ke ekahle kokubili abadala kanye nezingane. Recipe ibhali iphalishi e multivarka kuhilela ukusetshenziswa isethi ezithile izingxenye. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uqale inqubo, qinisekisa ukuthi unayo ezandleni zakho kuhlanganisa:
Glass pearl ibhali.
Ipheya utamatisi ezivuthiwe.
Ngaphezu kwalokho, udinga kancane amafutha yemifino, usawoti kanye namakhambi fresh. kungenziwa Ngesicelo wale mithandazo indawo ngamakhambi omisiwe.
Recipe ibhali iphalishi e multivarka ilula ukuze Kulula ukusingatha Omuny ngisho abangenalwazi. Kubalulekile ukuba banamathele Kunconywa esiphezulu ukucacisa ubuchwepheshe. Ngesikhathi besanda kuqala kufanele uthathe imifino. Basuke sihlanza wageza phansi. Onion uthathe cubes ezincane, izaqathe notamatisi kusetshenzwe ngumuntu iflothi.
Endishini Multivarki kokufumbathisa nge amafutha yemifino, wafaka imifino oqoshiwe kabani phansi futhi kancane Fry kwabo. Ngemva kwemizuzu embalwa bethandazile wanezela kubo oluthile lokudla pre-wageza, usawoti kanye namakhambi. Konke lokhu ligcwele amanzi elicwengekileyo futhi ukuxubana. Ilungiselela ibhali imifino, iresiphi ongawabona ngenhla nje, ku "eqeda". Cishe emahoreni amabili ngemva kwalokho ukupheka iphalishi ongakhonza.
Inketho nge yenkomo
Ngokusho lokhu iresiphi kungaba iyashesha ukupheka isidlo flavorful kakhulu futhi kwanelise surely ukujabulela nomndeni wakho. Ukwakha ke udinga imikhiqizo elula futhi lutholakale kalula, ezidayiswa nganoma iyiphi esitolo yesimanje. Ukuze ibhali inyama nemifino kufika isikhathi sokuba ama-umndeni dinner, hlola kusengaphambili, uma nginazo:
engamakhulu amane amagremu of yenkomo.
inkomishi kwesigamu pearl ibhali.
abangamakhulu amabili amagremu of amakhowe fresh.
eyikhulu amagremu ka peas oluhlaza.
Ngaphezu kwalokho ku ikhishi lakho kumele kube kancane zemifino amafutha, nosawoti kanye nezinongo.
Ngaphambi ukupheka pearl ibhali nemifino yenkomo, kudingeka alungiselele ukudla. Okokuqala, kufanele abilisiwe wasimanzisa oluthile lokudla pre-wageza. Lapho usekulungele, it esuswa umlilo sisongwe ngengubo yokulala.
inyama Oku-wageza aqotshwe ethosiwe emafutheni zemifino. Uma embozwe uqweqwe segolide, it is anosawoti, ayoliswe izinongo, uthele amanzi kanye sikadali phezu ukushisa ngokulinganisela kuze ithenda.
Ngemva kwalokho, inyama engeza amakhowe wageza aqotshwe. Zonke ngobumnene ugovuze futhi sikadali ikota yehora. Khona-ke, endishini yenkomo kanye amakhowe ukusakaza onion Diced futhi isanqante imibengo. imizuzu nje eyishumi ukuthambisa imifino wathumela kusengaphambili incibilikiswa uphizi cishe ngokushesha konke lokhu kuhlangene ibhali abilisiwe. Zonke ngobumnene ugovuze futhi emva kwemizuzu embalwa, ususa emlilweni.
I okufana ne zucchini
Ngokusho ubuchwepheshe echazwe ngezansi uphendulela ibhali emangalisayo okumnandi nemifino. Indlela Yokuthola lokhu dish kuhilela ukusetshenziswa izaqathe futhi usentekenteke squash elinambitheka sashukela. Kuyinto ngokusebenzisa inhlanganisela enjalo, futhi uphatha ukuthola iphalishi elimnandi kakhulu. Ukuze umndeni wakho bakwazi zama kwasemini, uzodinga:
abangamakhulu amabili amagremu of pearl ibhali.
Five clove sikagalikhi.
Ngaphezu kwalokho, okwamanje ngakwesokudla isandla kufanele kube amafutha yemifino, usawoti kanye izinongo.
Anyanisi nesweli bahlanza kusukela husk, kuchotshoziwe ithunyelwa pan, ngamafutha yemifino evuthayo. Ngemva kwemizuzu embalwa ukuze ukusabalala izaqathe thinly imibengo futhi amagejambazo zucchini ezinkulu. Zonke isiyaluyalu ezinhle futhi uqhubeke upheke phezu ukushisa ngokulinganisela. Ngokwezwi nezwi igama elithi umzuzu epanini engeza usawoti, izinongo kanye lokudla olwenziwe pre-wageza. Khona-ke wasibeka nonke izimbiza la Carte, uthele amanzi abilayo, amboze nge lid bese uthumela it kuhhavini. Ilungiselela ibhali imifino, iresiphi elinikeza kancane ephakeme, kwelinye namashumi ayisishiyagalombili degrees. kamuva Cishe ingxenye eyodwa ihora kungaba asuswe kuhhavini futhi wakhonza.
Inketho nge iklabishi
Iphalishi, iphekwé leresiphi, kuvela esihlwabusayo kakhulu futhi okunomsoco. Ngakho-ke, kungenzeka ukuba kalula ukondla wonke umndeni. Ukuze ekuwulungiseleleni uzodinga:
amagremu angamakhulu amathathu iklabishi.
Ziyikhulu namashumi ayisihlanu amagremu of amakhowe.
Ipheya wezipuni sauce Krasnodar.
eyikhulu amagremu kawoyela deodorized.
Oluthile lokudla bahlanza futhi ofakwe abandayo amanzi ngobusuku obubodwa. Ekuseni Ufaka endaweni colander, ithunyelwa ebhodweni, uthele amanzi abilayo futhi abilisiwe imizuzu eyishumi nanhlanu.
Ngo ehlukile pan gazinga anyanisi. Lapho iba segolide, enezele futhi izaqathe shredded, iklabishi Krasnodar sauce. Zonke isiyaluyalu ezinhle futhi sikadali phezu ukushisa ngokulinganisela. imifino Ready kuhlangene pearl ibhali iphalishi. Kukhona futhi uthumele amakhowe zangaphambi ethosiwe. Namanje enyakaza futhi zibekwe phezu plate. Ngesicelo ibhali kokuqendwa nge imifino kanye amakhowe abafafazwe amakhambi oqoshiwe.
Sevastopol amathempeli. St Nicholas Church (isithombe)
Izinhlobo uphahla: Indlela Ezisithinta induduzo egumbini?